फोटो संग एक सरल फल सलाद नुस्खा
खाद्य र पेय पदार्थ, मिठाईहरू
फल सलाद नुस्खा, फोटो तल हेर्न सक्नुहुन्छ जुन को, हाम्रो देशमा धेरै लोकप्रिय छन्। र यो व्यर्थमा छ। आखिर, यो पकवान मात्र धेरै स्वादिष्ट, तर पनि उपयोगी छ। यसबाहेक, फल सलाद को तयारी धेरै समय लाग्न गर्दैन। तपाईं, सबै सामाग्री प्रशोधन गर्न तिनीहरूलाई काट्नु र केही सस खन्याउन मात्र आवश्यक छ।
फोटो संग फल सलाद नुस्खा आफ्नो दैनिक आहार विविधता गर्नेछ। तिनीहरूले एकदम व्यक्ति को अवस्था सुधार, शरीर मा भिटामिन र खनिज को कमी को लागि क्षतिपूर्ति गर्न मद्दत गर्नेछ।
खाना पकाउनु सामाग्री के के हुन्?
फल सलाद लागि एक सरल नुस्खा सम्पूर्ण फरक सामाग्री समावेश हुन सक्छ। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, तिनीहरूले प्राकृतिक हो र additives र nitrates को एक किसिम समावेश छैन।
यसलाई आफ्नै बाली प्रयोग गरेर स्वादिष्ट फल सलाद खाना पकाउनु भन्दा राम्रो छ। तपाईं एउटा उत्सुक गर्मी बासिन्दा, बजार मा सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जन लागि यस्तो उत्पादनहरु को खरीद छैनन् भने।
विभिन्न निशाना, wormholes र यति मा बिना केवल ताजा फल चयन गर्नुहोस्। हामी छैन भूल गर्नुपर्छ हुनत सबै, सुन्दर चिल्लो र चमकदार उत्पादनहरु उपयोगी छन्। तिनीहरूले रसायन प्रयोग प्रक्रिया छैन भनेर पक्का, र केवल यो मामला खरिद गर्छौं।
कसरी खाना पकाउनु?
तपाईं जटिल र गर्न समय छैन भने एक सरल फल सलाद नुस्खा प्रयोग गर्न राम्रो छ ठीक भोजन। वास्तवमा, यस्तो नाश्ता तयार लागि विकल्प एकदम ठूलो संख्या हो। र को लागि तपाईं आवश्यक उपलब्ध केही व्यञ्जनहरु छैनन्। वास्तवमा, केही फल संयोजन गरेर, तपाईंले आफ्नो सबै घरेलू द्वारा सराहना गरिनेछ आफ्नै स्वादिष्ट र स्वस्थ सलाद सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
नियम, एक सरल फल सलाद सामाग्री को एक न्यूनतम सेट समावेश गर्दछ र धेरै समय पकाउने लिन गर्दैन। तर यो यो पकवान सुन्दर हुनुपर्छ भन्ने होइन।
यसरी, सलाद विशेष को तयारी मा एक महत्वपूर्ण सफलता कारक यसको सही कार्यान्वयन छ। कारण काम फल धेरै सुविधाजनक छ र तिनीहरूले सधैं रंगीन र उज्ज्वल हेर्न भन्ने तथ्यलाई गर्न, spectacularly कुनै पनि अन्य धेरै सजिलो एक पकवान जस्तै सजाउनु। तपाईं रचनात्मक कल्पना देखाउने र प्रयोग गरिरहेका सुरु गर्न मात्र आवश्यक यसो गर्न।
हामी तपाईंलाई बताउन अघि कसरी घर मा एक फल सलाद बनाउन, म यो प्रक्रिया धेरै सरल छ भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसैले, यो पनि एउटा अनुभवहीन कुक सामना गर्न सक्षम छ।
सामान्यतया, मीठो फल को एक सलाद तयार विशेष ह्यान्डलिङ आवश्यक छैन। तिनीहरूले न्यानो पानी मात्र राम्रो धुने र त्यसपछि विभिन्न बालाको, बोक्रा, बीउ बक्स, र यति देखि साफ हुनुपर्छ। यो भर्ने सस को उपस्थिति को हेरचाह गर्न आवश्यक पनि छ। प्रायजसो, फल सलाद यसको आफ्नै रस मा तालिका, साथै कुनै पनि मीठो तरल वा सिरप मा सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तथापि, तपाईं भर्ने क्रीम, खट्टे क्रीम र अन्य उत्पादनहरु को एक किसिम प्रयोग गरेर आफ्नो कल्पना खेती गर्न सक्नुहुन्छ।
फल सलाद: एक सरल र सजिलो को लागि नुस्खा
तपाईं छोटो समयमा एक स्वादिष्ट र स्वस्थ सलाद मिठाई तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी यस नुस्खा प्रयोग सुझाव। यो वास्तवमा रसदार र पौष्टिक बाहिर गरिएका मात्र ताजा र गुणस्तर सामाग्री किन्न मनमोहक छ।
त्यसैले हामी स्वादिष्ट फल सलाद पकाउन आवश्यक के खाद्य पदार्थ? यस नुस्खा सरल छ को खरीद आवश्यक छ:
ठूलो नरम खुरमा, तर स्थिर छैन -2मध्यम पीसी;।
नासपाती पाकेको "Pakham" - ठूलो2पीसी;।
मीठो सुन्तला - 1 पीसी;।
सानो कागति - 1 पीसी;।
पाकेको केरा र नरम - 1 पीसी;।
गारनेट अनाज - पहिलो फल;
मह ताजा lipovogo- 6-8 ठूलो चम्मच;
रातो अङ्गुर - 250 ग्राम;
Kiwi नरम गैर-अम्लीय -3पीसी;।
स्याउ रातो मिठाई - 1 पीसी।
को घटक को सबै फल सलाद गर्नुअघि प्रक्रियाका। यो उद्देश्य लागि, उत्पादनहरु राम्ररी तातो पानी मा धोए, र त्यसपछि आफ्नो शुद्धीकरण गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। मीठो सुन्तला अंगीठी (zest)। कि पछि, बाँकी मज्जा फिल्म अलग र मध्यम टुक्रा कटा छ। घन मा एक केले बोक्रा र कटौती संग। सत्यता पनि स्याउ संग कुचल र पाकेको नाशपाती छ। तर पहिले, उनि, मात्र होइन छाला बाट तर पनि बीउ बक्स मा साफ छन्। स्याउ र त्यसपछि एक अलग कचौरा मा फैलाउन र कागति संग छर्कियो। यो तिनीहरूले कालो छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। को kiwi लागि, यो एक धारिलो चक्कु संग volosyanistoy सतह देखि purified छ र घन मा कटौती। पनि यो छाला बाट हटाउने पछि चोट र नरम खुरमा।
कम से कम राम्ररी धोएर रातो अङ्गुर मा, आधा मा विभाजन र हड्डी बाहिर।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, एक सरल फल सलाद नुस्खा धेरै चाँडै कार्यान्वयन गरिएको छ। सबै सामाग्री साफ र ठीक चोट भएपछि, व्यञ्जन को गठन गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। यो अन्त गर्न, एक कचौरा मा shredded केले प्रसार, त्यसपछि तिनीहरूलाई गर्न zest थप्न र राम्रो मिश्रण। त्यसपछि, एउटै कचौरा मा राखिएको स्याउ, कागती को रस, सुन्तला, kiwi, नाशपाती, रातो अङ्गुर र persimmons संग छिडकना। यी सबै उत्पादनहरू तरल स्वाद कागती मह र राम्रो मिश्रण।
तालिकामा प्रस्तुत रूपमा?
फल सलाद तयार भएपछि, बरफ-क्रीम कटोरे मा बाहिर फैलाउन त्यसपछि दारिम बीउ संग छिडकना। यस फारममा, धेरै गुलियो र स्वादिष्ट खाजा एक चम्चा वा काँटा मिठाई संग तालिका प्रस्तुत।
मीठा स्याउ र सुन्ताला को एक सलाद बनाउन
माथि उल्लेख रूपमा, एक सरल फल सलाद नुस्खा विभिन्न सामाग्री को प्रयोग हुन सक्छ। यो पकवान बनाउन, तपाईं आवश्यक छ:
रक्सी सिरका -2ठूलो चम्मच;
ताजा सुन्तला रस निचोडा -2ठूलो चम्मच;
तेल -2ठूलो चम्मच;
seedless किसमिस गाढा - साढे कप;
अखरोट - साढे कप;
; Sprigs को एक जोडी - कम टंकशाला
मीठो रातो स्याउ -4पीसी;।
समुद्र नुन, allspice - स्वाद लागू गर्न।
घटक को तयारी
सलाद मीठो सुन्तला लिन्छ फल तयार, यो राम्ररी र स्लाइस विभाजित धुन। सानो टुक्रा मा जस्ताको तस्तै कट सबै चलचित्रहरू तिनीहरूलाई हटाउँदै। त्यसपछि खुली रातो स्याउ, बीउ बक्स र कटा मध्यम पासा तिनीहरूलाई हटाउन। अखरोट सन्दर्भमा, आफ्नो राम्ररी क्रमबद्ध, को छनौट मा साफ र माइक्रोवेव ओवन मा सुकेको। धारिलो चक्कु आफ्नो जमीन को अन्त मा।
आवश्यक सामाग्री प्रशोधन पछि भरने सस खाना पकाउने सुरु गर्न। यो गर्न, मिश्रण सिरका, तेल र सुन्तला रस। त्यसपछि तिनीहरूले राम्ररी धोएर र लागि ¼ घण्टा जस्तै बाँया किसमिस थप्नुहोस्। इच्छित यदि थप सस, मरिच र नुन संग स्वादिष्ट।
गठन र तालिका खुवाउने प्रक्रिया
फल सलाद एक ठूलो कचौरा मा गठन गरिएको छ। यो सुन्ताला र स्याउ फैलाउन र त्यसपछि अखरोट थप्न र किशमिश सस संग इन्धन भर्ने खन्याउन। ताजा टंकशाला को पत्रदल को सामाग्री पनि थपिएको र राम्ररी मिश्रण। जस्तै, को सलाद एक गिलास kremanki मा फैलाउन र तालिका प्रस्तुत गरिएको छ।
5 मिनेट को लागि एक फल सलाद बनाउन
यदि मेहमान दरवाजे मा हो, र तपाईं तिनीहरूलाई रम्न गर्न केही छ, हामी तपाईंलाई एउटा द्रुत स्याउ सलाद के सुझाव। उहाँलाई लागि, हामी आवश्यक:
मीठो हरियो स्याउ -2पीसी;।
रातो मरिच पाउडर - अपूर्ण चम्मच;
धुलो दालचिनी - मिठाई चम्चा;
ताजा कागतीको - 0.5 पीसी। (रस लागि आवश्यक);
सलाद हरियो - 1-2 टुक्रा।
तयारी को प्रक्रिया
यो सलाद बनाउन, तपाईं ठीक5मिनेट आवश्यक छ। हरियो स्याउ राम्ररी तातो पानी मा धोए र त्यसपछि सीधा बोक्रा देखि पातलो स्लाइस मा कटौती (केवल कोर हटाइएको छ)। तिनीहरूले गहिरो कचौरा राख्नु भनेर पछि, रातो खुर्सानी र दालचिनी संग स्वादिष्ट। पनि फल ताजा निचोडा कागति को रस संग छर्कियो। यो मात्र स्वाद को लागि आवश्यक छ, तर पनि कालो छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न।
सबै राम्ररी मिश्रित सामाग्री बाहिर राखे, र त्यसपछि अग्रिम पात मा लाइन छ जो को तल एक सुन्दर सलाद कचौरा मा बदलाव सलाद को। यस फारममा अतिथि खाना पकवान मुख्य भोजन अघि प्रस्तुत।
हामी छिटो मीठो फल सलाद र दही बनाउन
दही (यो पकवान को फोटो यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ) संग फल सलाद छोराछोरी संग धेरै लोकप्रिय छ। र यो छैन अचम्मको छ। आखिर, यो पकवान सधैं, अविश्वसनीय सुन्दर मीठो र स्वादिष्ट प्राप्त। यो हेर्न, हामी अहिले यो गर्न पक्का छन्। यो हामीले आवश्यक:
मीठो रातो स्याउ -2पीसी;।
पाकेको केले -2पीसी;।
नरम पाकेको kiwi -2पीसी;।
नरम नाशपाती -2पीसी;।
गारनेट अनाज - 30 G;
रातो अङ्गुर - 100 ग्राम;
मीठो दही - वैकल्पिक थप्नुहोस्।
फल सबै किनेको भएको, तुरुन्तै तिनीहरूलाई प्रशोधन सुरु गर्नुपर्छ। यो गर्न, सामाग्री राम्ररी बीउ बक्स, बीउ र बालाको धोए र, खुली छन्। त्यसपछि सबै फल धेरै ठूलो घन छैन कटौती।
सलाद गठन प्रक्रिया
मीठो फल सलाद सधैं धेरै सजिलै गठन गरिएको छ। एक गहिरो कन्टेनर मा नाशपाती, स्याउ, केले, रातो अङ्गुर र kiwi फैलियो। त्यसपछि आफ्नो प्यारो प्राकृतिक दही खन्याउन र राम्ररी मिश्रित। परिणाम धेरै सुन्दर र रंगीन पकवान छ।
कसरी तालिका ल्याउन?
दही संग फल सलाद बनाउन, यो एक गिलास kremanki मा फैलाउन छ। त्यसपछि गारनेट अनाज प्रयोग सजाया र पाहुनाहरूसँग सिकाउँछ पकवान मिठाई चम्चा।
(फ्रिज कोठा तापमान वा मा) को भरिएको फारम मा एक खाजा Soaking अत्यधिक खराब छ। अन्यथा, यो "बग्छ" र धेरै स्वादिष्ट र सुन्दर।
दही गर्न साथै, यो मिठाई चार्ज र अलिकति क्रीम, साथै कुनै पनि सिरप वा मह पग्लियो गर्न सकिन्छ।
फल सलाद व्यञ्जनहरु हामी विचार मात्र व्यक्तिहरूलाई छैनन्। रचनात्मक कल्पना प्रदर्शन, र सही उत्पादनहरू प्रयोग, तपाईंले आफ्नो अतिथि को कुनै पनि कहिल्यै दिनेछु जो देखि अझ मूल र स्वादिष्ट डेसर्ट गर्न सक्षम हुनेछ।
रोल "Bounty" पाक बिना: व्यञ्जनहरु
सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु, पकाउने विकल्प र समीक्षा: पाक बिना gelatin संग केक
शरबत - एक मिठाई वा पिउन?
चेरी strudel - तैयारी नियमहरु
चकलेट "नेपोलियन": फोटो संग केक नुस्खा
व्यापारी - यो के हो? विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली
"घर-2" ओल्गा Vlasova को पूर्व-सदस्य गुप्त जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
जीएसएम-अलार्म को ग्यारेज लागि संकेत: चयन गर्न के?
Betta गाउँ, क्रास्नोडार क्षेत्र। तपाईं प्रयास र bustle देखि आराम गर्न सक्छन् जहाँ एक ठाउँ
GAZ-2705 कार्गो भ्यान (सबै-धातु,7सिट): विवरण, मूल्य
"इस्ला-Moos": मूल्य, स्थान, समीक्षा। प्रयोगको लागि निर्देशन
तपाईंको स्नीकरहरू छिट्टै कसरी सुक्छ: केही सुझावहरू
मरिच - क्यालोरी उत्पादनहरु
यूक्रेनको राहत: विशेषताहरू, मुख्य विशेषताहरू र विशेषताहरू